ग्लोवल टाइम्सको सर्वे : ९० प्रतिशत चिनियाँ भारतमाथि सै'न्य का'रवाही गर्नुपर्ने पक्षमा - Himali Patrika
ग्लोवल टाइम्सको सर्वे : ९० प्रतिशत चिनियाँ भारतमाथि सै’न्य का’रवाही गर्नुपर्ने पक्षमा
हिमाली पत्रिका १२ भाद्र २०७७, 9:55 am
काठमाडौं। भारत र चीनबीच तनाव बढिहरेका बेला चीनको सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोवल टाइम्सले एक सर्वे गरेको छ। चिनियाँ एक एजेन्सीसँग मिलेर भारत–ची सम्बन्धका बारेमा सर्वे गरिएको ग्लोवल टाइम्सले जनाएको छ।
सर्वेमा करिब २ हजार मानिस सहभागी रहेको जनाइएको छ। सर्वोमा बेइजिङ, वुहान, सांघाई शहरका मासिहरु सहभागी रहेको ग्लोवल टाइम्सले जनाएको छ। सर्वेमा सहभागी मध्ये ९० प्रतिशतले भारत र चीनबीच तनाव हुँदा सैन्य कारबाही गर्नुपर्ने मत जाहेर गरेका छन्।
यस्तो सर्वे भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा तनाव जारी रहेका बेला गरिएको हो। हालै लद्दाखमा चीन भारतका सेनाबीच भएको हिं’स्रक झ’ड’पामा २० जना भारतीय सै’निक मा’रिएका थिए। सो घ’ट’नायता भारत र चीनबीच त’नाव जारी छ।
ग्लोवल टाइम्सका अनुसार सर्वेमा सहभागी ५१ प्रतिशत मानिसहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मन पराउने बताएका छन्।
यस्तै ७० प्रतिशतले चीन र भारतबीच श’त्रुता’पूर्ण व्यवहार रहेको विचार राखेका छन्। जबकी २६ प्रतिशतले भारतलाई राम्रो छिमेकी भनेका छन्। यो सर्वे १७ देखि २० अगस्टसम्म गराइएको थियो।
भारत र चीनबीच सीमामा तनाव बढेपछि दुबै मुलुकहरुले ठूलो संख्यामा से’ना सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा ल’डा’कु विमान र अ’त्या’धुनिक ह’ति’यार पनि दुबैतर्फ जम्मा पारिएको छ। तर, दुबैदेशबीच कूटनीतिक स्तरमा पनि लगातार वार्ताहरु भइरहेका छन्। भारत र चीनबीच १९६२ मा यु’द्ध भइसकेको छ। जसमा भारतले प’राजय भोगेको थियो।
भोलिबाट लाइसेन्सको कोटा हट्ने अनलाइन फारम खुल्ने
नेपाली ‘टिनेजर’ युवतीहरुको मनमा बस्ने यी युवा को हुन् ?
सत्ताबाट उत्रिएपछि डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनकै समर्थकले गाली गर्न थाले
ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भने झैँ भयो पोम्पेओसहित…
डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका फोहोर सफा गर्दै जो बाइडेन, सत्तामा आएलगतै…
वर्षभरीको पाप पखाल्न माइनस १४ डिग्रीको पानीमा डुबुल्की मारे रुसी…
नेपाल जतिसुकै भारत विरोधी भएपनि हामी नेपालसंग शत्रुताको कल्पना पनि…
अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीले ‘फुलटाइम’ काम गर्न पाउने
संकटपछि झन् शक्तिशाली बन्यो कतार ! जित कसको भयो ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्वीटर अकाउन्ट सधैंका लागि बन्द
भोलिबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को अनलाइन फारम खुल्ने भएको छ। योसँगै निश्चित कोटा सिस्टम पनि हट्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले जानकारी…
नेपालली सामाजिक संजालमा एउटा तस्विर छाइरहेको छ। शारीरिक सुपमा सुगठित, अग्लो कद, लामो कपाल त्यसैमा शरिरैभर ट्याट्यु। झट्ट हेर्दा नेपाली जनजाती युवा जस्तै देखिने अनुहार…
सत्ताबाट उत्रिएका अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उनकै समर्थकले गाली गर्न थालेका छन्। गत वर्षको राष्ट्रपति निर्वाचनमा दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बनेका ट्रम्पले पराजित भएपछि…
काठमाडौं । चीनले अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओसहित डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनका २८ अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा दखल दिएको भन्दै चीनले…
काठमाडौँ। डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारले गरेका विभिन्न गल्तिहरु बाइडेन सरकारललाई कसरी डिल गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। ट्रम्पका कारण चीनसंग बिग्रिएको आर्थिक कारोबार, इरान…